Purple Chishanu: kuti vana muzvikoro vanoremerwa sei neBPBTI nhema: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa13 December 2019	• 17 Comments
Nezuro ndakagamuchira email kubva uko zvinoita sekunge maneja manejimendi weVMBO arikudaidza vadzidzi vayo kuti vapfeke neruvara rwepepuru mune yeiyo 'yeChishanu yepepuru'. Munguva yakapfuura isu taingova nemhuka zuva, baba naamai zuva, asi mazuva ano une zuva renyika neizvi uye nezuva rezvenyika reizvozvo. Iwe une zuva rinenge zvese zvese! Izvo zvinonyanya kunyanya kusimbisa mavara. Kuti isu zvakare tiri kubata nemuchina wemagetsi (LGBTI) propaganda, zvakajeka kubva pamashoko pazasi kuti VMBO yakatumira Bouwens (Limburg) kuvadzidzi vayo.
Verenga kuti matare evadzidzi anoita sei kushandisa bhajeti rechikoro pamapepa eLBBTI neruzivo ruzivo. "Izvi zvakagadzirirwa pamwe nevamwe vatungamiriri vechikwata uye timu yekutsigira". Ndiani kana chii icho tsigiro timu?
Zviripachena kuti vana vari kuvezwa-vanoshingairira kudzidziswa kushandura kuchidaviro cheLBBTI. "Chishanu chine chinangwa izuva iro vadzidzi nevadzidzi vakapfeka ruvara rwepepuru vanogona kuratidza kubatana kwavo neungochani, bisexinyorwa, lesbians uye transgender vanhu," mushumo unodaro. Solidarity? Zvino iwe uri mubatanidzwa nei? Chii chinonzi 'kubatana' zvakadaro? Tiri kutaura nezve kubatana kwezvematongerwo enyika kana kwemutemo?
mubatanidzwa wezvematongerwo enyika: kuziva kwekubatana uye kuda kutakura mhedzisiro. (Van Dale)
kubatana maererano nemutemo wechibvumirano: kubatanidzwa uye huwandu hwakawanda hwevakweretesi kana vanechikwereti. Mumwe nemumwe wavo anogona kubva akumbira chikwereti chose kana kubatwa nemhosva yezvose.
Ko vanhu vane chikwereti chinosungirwa kune LGBTI nharaunda here? Saka kana iwe uchizivisa kubatana kwako nokupfeka zvepepuru, urikureva here kuti uri kuda kutakura zvikwereti zvechikwereti chako? Uye chii chikwereti chisungo ichocho? Ndizvozvo ichi chikwereti chisungo? Kana isu tiri kungotaura nezve 'kubatana' mupfungwa ye 'isu takamira shure kwako'? Asi chii chaizvo chaunotsigira? Ndiwo "Tinotsigira pfungwa yekuti munhu wese anofanirwa kuwana label uye kuti boka rako rinofanira kuuya kumberi zvakanyanya"? Uye zvakadiniko nekubatana pamwe neanechani? Tsamba H H iyi muchidimbu haimiriri ungochani, asi ngochani.
Zvakanaka, saka, iwe unopfeka zveruzhowa uye ipapo unoratidza kubatana neboka? Solidarity mune chii? Uye ko kana usinga pfeki zveruvara rwepepuru? Kana iwe ukandibvunza, isu tiri kupupurira propaganda indoctrination yehudiki. Kusarudzika kunomutswa kune kwakajairika. Ehe unogona kupokana kuti kuva lesbian, ngochani, bisexual kana transgender hausisiri mutsauko. Zvakanaka ipapo. Ipapo hatichadi kubatana nazvo. Kana iro boka rikatanga kuuya muhuwandu, haisisiri boka reshoma. Asi isu tichaitawo zvimwe chete nemaKristu, maMuslim, vatema, vachena, Chinese, ChiArabic, Surinamese uye zvese zvinyorwa zvatingafungidzira? Munogadzira sei rusaruro? Izvo zvinotanga nekuravira.
Mubhuku rangu ndinotsanangura kuti muraraungu chiratidzo chechinamato chitsva yenyika uye hurumende yenyika itsva. Yakanga yatove chiratidzo chevarwi vemuraraungu (Greenpeace) uye ikozvino iri zvakare chiratidzo che LGBTI nharaunda. Muraraungu waive chiratidzo chehasha dzaMwari. Chaive chiratidzo chakaonekwa mudenga mushure memafashama makuru. Mushure memafashama aya, Noa akabvumidzwa kuisa humunhu hutsva nekuvakazve humambo hwemhuka. Muraraungu ndizvo zvazvakaita chiratidzo cheshanduko huru. Ndokusaka ini ndichitsanangura mubhuku rangu kuti vanhu vari kugadzirirwa iyo transgender-transhuman, ine yekupedzisira chinangwa chekupererwa kwakazara neane hungwaru hwengwaru (AI).
Iwo mauto emuraraungu anobva kuGreenpeace akashandurwa kuita maExpinction Rebellion Revolution mamaneja. Muraraungu unoratidzika kunge unomirira kushorwa kwezvakatipoteredza, kubatanidza uye kusunungurwa kwevakadzi, asi chiri chiratidzo chehumambo hwehutongi hwenyika huri kuuya, sekutsanangurwa kwandaitwa mubhuku rangu idzva.
Nhanho yekutanga inoenda kune transgender transhuman ndeimwe hutongi hwekutonga, ichidana kudzokorodza kudzidzisa misasa chiona izvozvi. Iyo tekinoroji yekutonga inogona kuiswa nekubatanidza kuparadza kwemamiriro ekunze kune CO2 mutoro. Kuzadzikiswa kwayo kunogona kuzadzwa ne 'internet yezvinhu', dijitari (inoteverwa crypto) mari uye mutero wepasi rose we CO2. EU iri kubudikidza naFrans Timmermans, saka, usapukuta uye kumirira (sezvakakodzera rusununguko rwemagariro) kwechipiri nekuunzwa kweiyo hurongwa. Sokunge zvaive zvatove pasherufu Greta Thunberg asati atombo funga nezve truancy. Iwo mutero unongouya uye kana zvichidikanwa, nyika dzinongomanikidzwa kuteerera. Kana zvichidikanwa neuto remauto (ona pano).
"Chii chine chekuita nenharaunda yeLBBTI?" Unogona kufunga izvozvi? Huye, isu tiri panguva yemanheru ekumanikidza mamwe mazano. Iyo muraraungu haingobatanidza chete kushanduka kwezvakatipotera kune LGBTI nharaunda, asiwo neudzvanyiriri hutongi hwenyika hunosimbisa mazano. Saka patova nemanzwi kuti aya makamu- dzidzo makambi anofanirwa kuuya (maona pano) uye kana ukabaya pane inoenderana nechinyorwa ichocho, uchaona kuti mutemo weDutch unogona kutodaidza mumwe munhu kuti 'psychotic' zvichibva pane zvinonzi 'kunyengera'. Iwe une zvekunyepedzera (kana kufungidzira) kana mazano ako achitsauka kubva kuchokwadi chinogamuchirwa chokwadi.
Naizvozvo, kana iyo EU ikataura kuti CO2 mutero unofanirwa kuunzwa (nekuti kana zvisina kudaro isu takatarisana nenjodzi yemamiriro ekunze) ipapo iwo ndiwo mafungiro ari pamutemo (anotsanangurwa se'chokwadi '). Kana iwe usingatendi mune iyi yemutemo maonero, saka iwe uchatambura nekunyepedzera (mazano anotsauka kubva ku'chokwadi '). Izvi zvinoreva zvakananga kuti zvinoenderana neWvGZZ (mutemo wekumanikidza wehutano hwepfungwa) unogona kutorwa ne psycholance yekurapwa mukiriniki yeGGZ (saka dzidzo zvakare), nekuti maererano nerondedzero yacho uri psychotic.
Verenga mukati gwaro iri reEU kuti kutaura kwechirereko kusiri kwechivanhu kwavewo kwakajairwa. Zvinorevei izvo mumashoko anoshanda? Izvi zvinoreva zvakare kuti kana ukasabvumirana neizvi nekuda kwechimwe chivimbo, izvi zvinowira pasi pebhokisi re'kunyepedzera '. Naizvozvo iwe unonyorerawo izvozvo inogona kutorwa kunzvimbo yeGGZ (kosi yedzidzo). Uye iwo makuru madata system anogona kuongorora kuti iwe uri kuomerera kuchitsva chechikadzi- kusarerekera kutaura kujairika pasina iwe uchiona.
Uyezve hatina kana kutaura zita rakasarudzwa nehungwaru 'kusanganisa'. Kana iwe ukadzidza zvinyorwa zvepamhepo, zvinoita sekunge izvi zvine chekuita nekusimudzira kweBPBTI boka, maanofanira, semuenzaniso, kupiwa kutarisirwa kwakanyanya mumafambisirwo ekushandisa. Hurumende inotopa rubatsiro rwekuhaya vanhukadzi nevanhu veboka reLBBTI. Ingozvitarisa iyi tsanangudzo yeiyo Implementation Subsidies kune Institutions department kana tarisa iyo skrini pazasi.
Muchidimbu: kana uri murume anochata, uri kusara kumashure. Muchokwadi, iwe uchave unosarura, nekuti mushandirwi anenge achitsvaga vashandi anogashira subsidy yekubhadhara chero chinhu kunze kwemurume waachangochata. Izwi rekuti 'inclusiveness' rinoreva chaizvo kuti 'kusarudzika' (inozivikanwawo senzira yerusarura); kusarudzika kuburikidza nekusarudzika kurapwa kunoenderana nerubatsiro
Saka chii chinounzwa sekugamuchirwa uye kusunungurwa kunoguma mukusagadzikana kweiye murume nomurume mukuita. Yakabatanidzwa kune iyi ndiyo mitemo yese iyo inovimbisa kuti chero munhu asingabvumirani nenyika yepfungwa anogona kutumirwa kunzvimbo yehutano hwepfungwa (kumanikidzwa uye pasina kupindira kwemutongi kana chiremba wepfungwa, kuburikidza neWvGGZ, kutanga ne2020). Izvi zvinogona, semuenzaniso, zvine hanya nemafungiro akasiyana pamusoro pemamiriro ekunze kana mazano akasiyana nezvekati mune zvematongerwo enyika kutaura. Izvi zvinonzwika sei kwauri? Hatisi isu tinongotaura nezve fascism here? Hatisi isu tinongotaura nezvemapurisa ekufunga here? Chero zvazvingaitika, mapurisa anogara achishanyira zvikoro (sezvaungaona mumharidzo iri pamusoro). Zvijaire. Kana ita chiito, tenga bhuku rangu uye uriparadze sezvingabvira kune vese vana vanoiswa pasi pekumanikidzwa:
Kwayedza chinongedzo zvinyorwa: shandemusic.com xandowie.com, europa.eu, reizz.nl, neone.nl vanoers.nl
Sangano rinopesana nehutachiona hwekusagadzikana kwehutachiwana hwekuchengetedza hukama hwepabonde
Sei Marcus Rutte asingatauri kuti abudise kunze kwekamuri yehurochani hwake?
Jantje wakarurama uye anotya kubuda muimba yepamusoro #SorryJohan
Tags: bi, de, pfeka, mharaunda, homo, kubatanidza, kubatanidzwa, lesbisch, LHBTI, rudo, yepepuru, yepepuru, transgender, Chishanu
Chinyorwa chepamusoro zvakare, Martin. Ini pachangu ndanyora zvakati wandei mu2016 uye 2017 nezve yakarongwa 'Purple Revolution' yakatsigirwa kumashure ne EU mudiwa naGeorge Soros. Ruvara rwe'Chinese Chishanu 'saka zvinoita sekusawirirana. Pakutanga taive nePink change (2003, Georgia), iyo Orange (Ukraine, 2004), Saffron (yero) shanduko muMyanmar (2007), iyo yakundikana Green mukati Iran (2009), iyo 'Grapes Revolution' (bhuruu) muMoldova (2009), uye iyo "color change" muMacedonia (2016). Yese shanduko, kusanganisira irikuuya Chinangwa kumadokero, vakafanana George Soros uye mazhinji eruwadzano NGOs iye neEU rutsigiro, avo vese vari kushandira kusimudzira kusiyanisa uye transgender, mamiriro ekunze pamwe nehuwandu hwekuenda kune nyika.
Ziva kuti iwo mavara eraraungu anoteverwa kubva kumusoro kusvika pasi: pink / tsvuku, orenji, yero, girini, bhuruu uye zvino pepuru. Iwe unogona zvakare kutaura kuti ruvara rwepepuru ndiko kusangana kwemavara ebhuruu uye tsvuku, iwo mavara emureza weAmerica, uye bhuruu reEU mureza wakasanganiswa necommunist (/ Antifa / Extinction Rebellion) tsvuku, kana kusanganisa kwekodzero yechinyakare yezvematongerwo enyika. (MaRiberals, maChristian Democrats) ane maratidziro. Hapana kana mutsauko uripo pakati pavo, zvirokwazvo kwete muParamende yeEurope. Uye yepepuru ndeyechokwadi zvakare yakavhenganiswa ruvara rwetsika tsika yevakomana (bhuruu) nevasikana (pink). Kuda? Kana kuti zvese zvakanyatsofungwa nezvazvo here?
Kana zvisiri, zvichave zvakare fungidziro yekuti kumusangano weEU musi we12 Zvita wekutanga mukadzi Chancellor weAustria - kungofanana nevamwe vatungamiriri veEU vasina kuroora uye vasina vana - avo, semutungamiri weDare Repamusoro, vakatangisa kuroora kana vakadzi pabonde muAustria. kapuru yepepuru yakaonekwa. Angela Merkel aive muorenji. Pakuratidzwa kweKomisheni yake, mutungamiri mutsva weEC, Ursula von der Leyen akapfekedzwawo orenji uye akamira kumberi kwepepuru. Asi pamwe aya mavara ave ikozvino mune fashoni kana chimwe chinhu.
Kune zvikoro zvakasiyana siyana uye mumayunivhesiti muUS, vadzidzi nevadzidzi vanomanikidzwa kutora chikamu mune 'proBBTQ' zviitiko, izvo zvakaiswa mune zvinoburitswa se 'zviitike zvezviitiko' zvechokwadi 'kubatana'. Saka mhando yekubatana iyo iyo maSoviet yakadzvinyirira 'vanyori' ne'kunyepedzera 'kwemakumi emakore uye vakavavhara mumakadhi ( vakagadziriswa zvakakwana uye vakadzidziswa kuve vateveri vanoteerera - sezvazvinoitika nevechidiki vemazuva ano kumashopu emazuva ano ekuziva izvo zvinofanirwa kupasa zvikoro.
Zvese zvinoteera zvakapinza sechibvumirano cheMarxist anarchist Saul Alinsky, uyo akatsvaga pachena kushungurudzika kwemukati uye kwekupedzisira kudonha kwenzanga yeWestern, uye akadzidzisa vateveri vake 'kunyepa, kuba uye kubiridzira' kuti vazadzise chinangwa ichi. Mubhuku rake "Rules of Radicals" akanyora kuti: "Ngatisakanganwe kubvuma iro rekutanga rakanakisa mune ngano, ngano uye nhoroondo ... yekutanga yakanyanyisa yakapandukira kurongeka kwakagadzwa uye ikazviita nenzira inobudirira zvekuti akawana humambo hwake: "Luciferi." Uye saka tinosvika pakurongeka kwenyika yeLuciferian iyo iwe yaunonyora nezvako mubhuku rako uye zvinyorwa. Humambo hwake iyi hutachiona simulation yatinogara mairi.
Ndatenda nekuwedzera kwako kwakakosha.
Iwo mavara ezviratidziro zvechokwadi akasarudzwa aine chirevo.
Onawo Gene Sharp (CIA) yakashanduka shanduko iyo mumakore apfuura yaishandiswa kune idzo nyika dzese, inonyanya kuveva iyo iri muUkraine (unoziva avo Frans Timmermans vakangoerekana vamira paMaiden Square).
Rudzi rwekuchinja ikoko zvakare rwaive rwei?
Hongu zvakare kuparadza Kutendeuka kunoshanda (uye ino nguva pachena uye zvakabvumwa) iyo Gene Sharp yakajeka shanduko nzira.
Pamusoro pekushandiswa kwemauto ehondo kuti ashandise matanho ekuchinja kwemamiriro ekunze neuto remauto, ndakanga ndabatisa batano isiriyo muchinyorwa ichi.
CHURCH YEMADEDEN UNIVILS Kutanga-PASI LGBTQ + ALTAR ARTWORK RINONYANYA GAYS, maLesbians NAVANYENGERI MUGENESI kana EDEN REPLACING ADAMU NEEVE.
TimSchutte77 akanyora kuti:
Uye nzira chete yekupukunyuka kubva kugehena inouya yedhijitari ndiJesu, nekuti kubvutwa kwamaKristu ndekwekusuwa kese.
Ini ndinonzwisisa maitiro, asi ini zvakadaro ndinokurudzira kuverenga bhuku rangu. Ini zvakare ndakakura ndichifunga kuti wega kupukunyuka aizove Jesu, asi zvinobatsira kuti uongorore chimwe chinhu mberi. Ndinoita izvozvo mubhuku. Anonamatira kudzidziso dzechinyakare uye achirega vanhu vatende mazviri, iye anoda maitiro ekufamba, "Ah asi isu tinaJesu uye anouya kuzotitora isu pamberi pegehena rose pasi pano". Ini ndinotsanangudza mubhuku rangu kuti ndeye nhema imwe chete yehukadzi shuwa musungo.
Zvakazara bvumirana naMartin. Ini, zvakare, ndatenda mukupukunyuka kwemashiripiti kwemakore. Asi izvo chete hazvigone kuchengetedzwa zvichibva pane izvo zvakakosha zvinyorwa (uye mamiriro) eBhaibheri iro pacharo. Uye kunyangwe hazvo maChristu mazhinji asina kumbobvira atambudzwa munhoroondo yese, avo vari kuMadokero vanoramba vakabatirira kunyengedzo iyi, "kutongwa kwekutongwa," nekuti vanoreva "kusuwa kose," kazhinji "kutambudzika kukuru." yakataurwa yaizoponeswa.
MaKristu achiri kutenda izvi vanowanzoziva zvishoma nezvebhuku ravo dzvene, nekuti muTestamente Itsva mune zvinyorwa zve37 pamusoro pekudzvinyirira, uye mumatare e36 kudzvinyirira kune chekuita nevatendi. Muchokwadi, Zvakazarurwa 1 inonyatsotaura kuti kutambudzika kukuru (kukuru) kwakatotanga. Kubva pamaonero eBhaibheri, kudzvinyirira kuri kwevatendi, sezvakuno verengwa chaizvo muzvinyorwa zvakasiyana. Izvo zvinotaurwawo sounhu hunokosha hwekutenda kwechokwadi.
Kana iwe ukaita kumwe kuongorora uye kufunga, iwe unozoona nhanho nhanho kuti izvo zvakawanda zvaunodzidziswa mumakereke uye nevaparidzi, uye zvirokwazvo 'kuzara' kwefungidziro yenguva yekupedzisira, kwakavakirwa pashoko rekukurumidza uye vanhu mune yakatarwa chitendero. (kutya) system. MaKristu achiri kutaurirana imwechete ngano dzakafanana dzavanogamuchira se 'chokwadi', asi iyo - zvakapusa: zvakare, zvakare maringe nemaBhaibheri avo - dzakarambwa.
Nenzira, kunogona kuve nerudzi rwe 'kurekodha', nekuti iyo tekinoroji ikozvino iri kure kuti chimwe chinhu chakadai chinogona kuiswa nenzira isingazivikanwe kubva kune chaiyo. Ko kana kurekodha kwakadaro kuri kwenhema, "chirahwe chinyuchi" sekunyora kwaMartin, kukwezvera vanhu mutirongo yakadzika iyo yavasinga vambotiza kubva mairi?
Ndokusaka ini ndichikurudzira vatendi kuti vaverenge bhuku raMartin. Iwe haufanire kubvumirana nezvose izvozvi, zvinhu zvinoverengeka zvinokatyamadza, asi chiyero chezvakanyorwa chakanyanyisa kukanganwa, nekuti ufakazi hweizvi hwunoonekwa kumativi ese akatipfuura uye muhupenyu hwevazhinji. ndizvo. Uye kuti nyika ino (/ simulation) inotongwa naLucifer, uyo zvakare anodzora zvitendero zvikuru, anotamba achipesana uye achisiya mabhiriyoni avo evateveri murima nezvekuti ndiani chaizvo anodhonza tambo, uye chii chinangwa chaicho ndizvo chete.
wieland schildmeijer akanyora kuti:
William Cooper akange achishandawo pane izvi kubva 8:30
Muchina wekuparadzira iri kumhanya zvakazara
... Tavistock manyepo ekuparadzira muchina wechero premium uye mutero, kureva.
"Pakati pechizvarwa chinotevera ndinotenda kuti vatungamiriri venyika vachazoona kuti hutano hwevacheche uye narco-hypnosis inoshanda zvakanyanya, sezviridzwa zvehurumende, kupfuura makirabhu nematirongo, uye kuti chishuwo chesimba chinogona kungogutsikana zvizere nekupa vanhu pfungwa mukati vanoda basa ravo sekuvarova nekuvarovera kuti vateerere. ”
- Aldous Huxley, tsamba kuna George Orwell
Chero bedzi dambudziko chairo risingagadziriswe nechido, ticharamba tichiongorora.
Ini ndinonzwisisa kuti varimi vakaita kutenderera kweawa nezuro. Nekubvumidzwa kwe 'zviremera' izvo zviri., Ivo vakomana vanofanira kunge vakafadzwa. Maita zvakanaka varimi.
Ehe, izvo zvese hazvishande ... zvese zvinogadzirwa
Chinhu chete chinobatsira ndechekuvhura magonhi ezvigaro uye madziro emayadhi, asi hongu idzo mombe dzakanaka dzinongodzokera mudanga kuitira kuti pasazove chero chinhu.
Zvakanaka, wobva waendesa matraki etiraki azere nemombe kuchivanze. Zvingave zvakanaka dai paine zviuru gumi zvemombe dzinofamba nemuHague.
Hakuna mutemo unorambidza mombe kuratidzira, saka haufanire kunyorera mvumo.
Zano: kana iwe uchipuruzira trekita mune ese mavara emuraraungu, mapurisa haawanzo kukusunga (kunze kwekubatana).
Chokwadi, zvese zvakaputirwa. Zvakanaka, iyo yemombe idzo ipfungwa inotamba. Asi varimi, mabhora, nhunzvi, haana izvozvo, sekureva zviri pamutemo zvachose. Ini handisi kuzopa zano vakomana pano.
Ndakanzwa kuti vashandi veTata Steel vari kuda kuenda kunorova. Ehe ndiri kuda kuziva, Kana vakarova maawa mashoma zvinova zvakawanda. Nekuti kurova kunonzi ndiko kwakanaka, asi haugone kushandisa icho kodzero. Vatongi vevakomana vanochengeta izvo. Zviri kurova kuti Amnesty International neHuman Rights Watch inogara ichimiririra kodzero dzevanhu kunze kwenyika asi kwete pano. Zvingave sei izvozvo? Tinofanira kuzviita zvakajairwa .. Saka tinopedza awa paine meseji, isu hatisi kuzviwana paTata Steel, tinogona kungozviita, kutamba. Saka mubatanidzwa haufanire kunetseka pamusoro pehomwe yekurova. Kana paine chaicho kurohwa, chichava chisina chinhu mukati memazuva mashoma nevashandi vese kana vakatsunga kurova. Uye iwe unofunga here kuti iwe unongobatana nebhodi rebato revashandi? Handidi. Vese vanozivana uye vanobvunzana neumwe kubva PAMUSORO, neZVO ZVINYANYA. Mubatanidzwa ungashanda nesimba here uye muwane dzimwe nhengo nyowani. Mukupedzisira, ZVESE ZVAKAITWA muNetherlands. Asi hongu mugari akanaka anofunga kuti zvakwana zvakare nekuti iye anoda chokwadi, inishuwarenzi yechinhu chose. Usave munhu anogunun'una kwete. Taura chokwadi! Kwete, ini handirembedze zvekushongedza kweKisimusi nhasi futi. Usatore Kisimusi wreath futi. Commerce iri mukufarira kwe ...
« Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo!
Mari yaBoris Johnson ndiyo inotungamira kuNexit? Fungidziro yangu yeEurope »
Total Visits: 15.832.405